चाडपर्वमा गरगहना मोह : ‘सुन’ लगानीको एक माध्यम | गृहपृष्ठ
Home चाडपर्वमा गरगहना मोह : ‘सुन’ लगानीको एक माध्यम
चाडपर्वमा गरगहना मोह : ‘सुन’ लगानीको एक माध्यम
काठमाडौं । सुन नारीहरूको प्रिय धातुका रूपमा चिनिन्छ । जति नै मूल्य बढे पनि उपभोगमा त्यति फरक नपर्ने वस्तु हो, सुन । आर्थिक हैसियतसँग पनि सुनको नाता जोडिएकाले पनि नेपालीहरूमा सुनप्रतिको मोह बढेको हो । साथै, सुनको मूल्यमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । १ महीनामा सुनको मूल्य रू. १ हजार ६ सय बढेर रू. ५७ हजार ८ सयमा पुगेको छ । नेपाली महिलाले मनाउने महान् चाड ‘हरितालिका तीज’मा पनि सुनका गहनाको प्रयोग हुन्छ । कतिपय महिलामा यस चाडलाई लक्षित गरी सुनका गरगहना हाल्ने प्रचलन बढिरहेको छ । ज्वेलर्स पसलहरूले पनि चाडबाडको मौका छोपेर विभिन्न योजना ल्याई ग्राहक आकर्षित गर्ने गर्छन् । जस्तै : एउटा सीमित रकममा थोरै रकम छूट वा केही उपहार योजनाले पनि ग्राहकलाई आकर्षित गर्छ । चाडपर्वमा ज्वेलर्स पसलको पनि राम्रै आम्दानी हुने गरेको छ । यो चाडमा राम्राराम्रा लुगा र गहना लगाएर साथीसँगीसँग तीजमा नाच्ने र प्रदर्शन गर्ने होड नै चल्छ । त्यसका लागि कोही महिला वर्षैपिच्छे गहना हाल्ने पनि गर्छन् ।
अहिले रकम बचत गर्ने र लगानी गर्ने धेरै माध्यम छन् । यसमा सुनमा लगानी गर्नु पनि एक हो । नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी घरजग्गा, शेयरबजार र सुनमा हुने गरेको छ । सुनमा लगानी गर्दा खासै प्रतिफल भने आउँदैन । तर, सुन नेपाली संस्कृति र परम्परासँग जोडिएकाले यसमा लगानी बढी हुने गरेको हो । पैसाको आवश्यकता परेका बेला सुन सजिलैसँग विक्री गर्न सकिने जिन्सी भएकाले पनि यसमा लगानी बढ्दो छ ।
समयसँगै विभिन्न डिजाइनका गरगहना प्रयोगमा आउन थालेका छन् । महिलाहरूले प्रयोग गर्ने गहनामा डिजाइनका साथै बहुमूल्य रत्नहरूसमेत जडान गरिएको हुन्छ । यस्ता गहना र कालीगढको ज्याला बढी लाग्ने भएकाले त्यसको विक्री गर्दा थोरै रकम हात पर्छ । बजारमा सुन १२ क्यारेटदेखि २४ क्यारेटसम्मको पाइन्छ । २४ क्यारेटको गहना लुलो हुन्छ । तर, त्यसको पुनः विक्री गर्नु परेमा मूल्यमा खासै अन्तर हुँदैन ।
अहिले नौगेडी, माइलो तिलहरी, छड्के तिलहरी, चन्द्रमा, सूर्यलगायतका सुनका गहना प्रचलनमा आएका छन् । यद्यपि, पारम्पारिक डिजाइनका गहनाहरू पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन् । चाडपर्व, विवाह वा व्रतबन्धमा यी गरगहनाको प्रयोग हुने गर्छ ।
गहना किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा :
पसल भरपर्दो हुनु आवश्यक
सुनको गुणस्तर बुझ्नुपर्ने
सुन खरीद गर्दा बिल लिन भुल्न नहुने
बिलमा प्यान नम्बर र भ्याट नम्बर समावेश गरिएको हुनुपर्ने
सुन विक्री गर्दा खरीद गरेको बिल आवश्यक पर्ने हुदाँ यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने
ग्राहकले बिलमा राखिएका शर्तहरू राम्ररी पढ्न जरुरी
लकरको प्रयोग गरेर सुन सुरक्षित राख्न सकिने